DOSBox: GNU / Linux တွင် DOS ပရိုဂရမ်းမင်းဘာသာစကားကိုဘယ်လိုသုံးရမည်နည်း။ | Linux မှ
ငါတို့အသုံးပြုသူများ GNU / Linux Distros မကြာခဏကျွန်ုပ်တို့သည်များသောအားဖြင့်အသုံးပြုသည် terminal (console)သာအနည်းငယ်အသုံးပြုသူများအနေဖြင့် Windows ကို သူတို့များသောအားဖြင့်လုပ်တယ်။ အချို့သောသက်တမ်းအရင့်ဆုံးသုံးစွဲသူများမှာ၎င်းကိုအသုံးပြုခြင်းနှင့်ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်သူများသာဖြစ်သည် ဆော့ဖ်ဝဲတီထွင်သို့မဟုတ်လွန်ခဲ့သောနှစ်၏ဂန္ဂိမ်းကစားခဲ့ပါတယ်.
ယခင်က၏များစွာသောအသုံးပြုသူများ GNU / Linux များ ထိုကဲ့သို့သောပရိုဂရမ်မာအဟောင်းများသို့မဟုတ် terminal ဂိမ်းများကို run နိုင်ခဲ့သည် DOSEmu သုံး၍ DOS, သို့သော်ဤစီမံကိန်းသည်တက်တက်ကြွကြွမရှိတော့ပါ၊ ထပ်ဆင့်လွှင့်မှုကိုလျှောက်လွှာကလွှဲပြောင်းယူလိုက်ပြီဖြစ်သည် DOSBox အတွက်လူသိမည်သည့်အသုံးပြုသူမဆိုထိုအချိန်များကိုပြန်ဖွင့်ရန်ခွင့်ပြုသည်။
၏ဖြစ်ရပ်အတွက် DOSEmu, အဘယ်သူ၏နာမကိုအမှီဆိုလိုသည် DOS emulation, လျှောက်လွှာတစ် ဦး ကို run ဖို့ခွင့်ပြုကဆိုသည် DOS စက်လည်ပတ်ရေးစနစ် များစွာသော DOS application များအပါအ ၀ င် DOS ပရိုဂရမ်များစွာရှိသည် DPMI (DOS ကာကွယ်ပေးသော Mode Interface o DOS အတွက် Protected Mode Interface) အမျိုးအစားရိုးရှင်းသောဂိမ်းအဖြစ် Doom တူရှုပ်ထွေးသော software ကိုရန် Windows ကို 3.1အနိမ့် GNU / Linux များ။ ဒါကြောင့် DOS အောက်မှာအလုပ်လုပ်ခဲ့တဲ့ပရိုဂရမ်းမင်းဘာသာစကားအဟောင်းတွေကိုသုံးဖို့အကောင်းဆုံးပဲ Foxpro, Pascal နှင့် Cအခြားသူများအကြား။
သို့သျောလညျး DOSEmu လက်ရှိဟုခေါ်တွင်အပြိုင်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု, ရှိပါတယ် DOSEmu2 အရာသည်ပိုမိုအဆင့်မြှင့်တင်ပြီး၎င်းကိုအောက်ပါ link မှတစ်ဆင့်ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်သည် - DOSEmu2.
အဲဒီအစား, DOSBox အတွက်လူသိ တူညီသောရည်မှန်းချက်ရှိသည့်၊ ခေတ်မီပြီးအဆင့်မြှင့်တင်ထားသောအစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်သည် DOS emulator သောကိုအသုံးပြုသည် SDL စာကြည့်တိုက်, ဘယ်စေသည် DOSBox အတွက်လူသိ ထိုကဲ့သို့သောကဲ့သို့သောကွဲပြားခြားနားသောပလက်ဖောင်းများပေါ်တွင်တပ်ဆင်ရန်အလွန်လွယ်ကူသည် Windows, BeOS, GNU / Linux, MacOS Xအခြားသူများများထဲတွင်။
ထို့အပြင်ခုနှစ်, DOSBox အတွက်လူသိ ထို့အပြင်အတုယူ CPU mode: 286/386 အစစ်အမှန် / ကာကွယ်ထားသည်၊ XMS / EMS ဖိုင်စနစ်လမ်းညွှန်များ၊ Tandy / Hercules / CGA / EGA / VGA / VESA ဂရပ်ဖစ်များနှင့် SoundBlaster / Gravis Ultra အသံကဒ်များကိုရရှိရန်အတွက် အကောင်းဆုံးသောလိုက်ဖက်တဲ့ ပြောတာက အဟောင်းအက်ပ်များအထူးသဖြင့် DOS ဂိမ်းများ.
1 DOSBox အတွက်လူသိ
1.1 DOSBox ကို Install လုပ်ပါ
1.2 DOSBox ကို ပြင်ဆင်၍ အသုံးပြုပါ
DOSBox ကို Install လုပ်ပါ
DOSBox အတွက်လူသိ အမျိုးမျိုးအတွက်တက်ကြွသည် DEBIAN GNU / Linux Distrosအောက်မှာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်း link ကိုထို့ကြောင့်၊ အောက်ပါ command line ကို သုံး၍ terminal (console) မှအလွယ်တကူ install နိုင်သည်။
dosbox install sudo apt
၎င်းကိုအသုံးပြုရန်အတွက်လျှောက်လွှာအတွက်ပရိုဂရမ်မီနူးကိုသင်ရိုးရိုးလေးရှာဖွေနိုင်သည် DOSBox emulator နှင့်ပြေး။ များသောအားဖြင့်ဤ app ကိုအမျိုးအစား app တစ်ခုအဖြစ်မှတ်တမ်းတင်သည်။ «ဂိမ်းများ»။ ဒါမှမဟုတ် terminal (console) မှအောက်ပါ command ကိုသုံးပြီးလုပ်ဆောင်သည် -
DOSBox ကို ပြင်ဆင်၍ အသုံးပြုပါ
ပြီးတာနဲ့ဖွင့်လှစ်သို့မဟုတ် run သာ၎င်း၏ အွန်လိုင်းလက်စွဲစာအုပ် သို့မဟုတ် terminal ကို (အမျိုးသား dosbox) သို့မဟုတ်သင်၏တိုင်ပင်ဆွေးနွေး ဝီကီစတင်သုံးစွဲရန်။ သို့သော်၊ ၎င်းကိုစတင်အသုံးပြုရန်အဓိကလုပ်ဆောင်ရမည့်အချက်မှာamount လုပ်ရန်ဖြစ်သည် virtual Drive ကို (Disk ကို) ကို C ဘယ်မှာကွဲပြားခြားနားပါလိမ့်မယ် DOS ပရိုဂရမ်များ (ပရိုဂရမ်းမင်းပတ်ဝန်းကျင်၊ ဂိမ်းများနှင့်အမျိုးမျိုးသော application များ) ကြောင်းကွပ်မျက်ခံရလိမ့်မည်။ အောက်မှာပြထားတဲ့အတိုင်း -
$ c / home / user / appdosbox ကို mount $ c: $ cd folderx $ executable.exe
မှတ်စု: ဖိုငျတှဲ "Appdosbox" သင့်ရွေးချယ်မှု၏အမည်၊ "Folderx" ဖိုင်တွဲ၏အမည်ဖြင့်အစားထိုးသင့်သည် DOS ပရိုဂရမ် (ပရိုဂရမ်းမင်းပတ်ဝန်းကျင်၊ ဂိမ်းများနှင့်အမျိုးမျိုးသော application) သင်ကွပ်မျက်ခံရရန်၎င်းကိုကူးယူပြီးနှင့် command ၏အမည် "Executable.exe" ၎င်းသည် executable နှင့်သက်ဆိုင်သောတစ်ခုဖြစ်ပြီး၎င်းကိုစတင်ရန်ကွပ်ကဲရမည်။ ငါတို့ကိစ္စတွင်ဖိုင်တွဲတစ်ခုမှကူးယူထားသည် DOS အတွက် FoxPro.
နောက်ဆုံးဖြစ်သော်လည်းအရေးပါသော, DOSBox အတွက်လူသိ သင့်အတွက်အကြံပြုသည် download အပိုင်းအချို့သုံးပါ ဂရပ်ဖစ် interface (Frontend) ကစီမံခန့်ခွဲခြင်းနှင့်ပြောင်းလဲပစ်ရန် interface ဘာသာစကား ပိုမိုကောင်းမွန်သောအသုံးပြုမှုအတွက်သင်၏ဒေသခံဘာသာစကားသို့ပြန်ဆိုပါ။ ထိုအချက်ကိုနေသော်လည်းစာရင်း၏ ရှေ့တန်း အဲဒါမှတ်ပုံတင်မထားဘူး DBGL၎င်းသည်အလွန်ကောင်းမွန်ပြီးအသုံးပြုရန်လွယ်ကူသည်။
မင်းမြင်တဲ့အတိုင်း DOSBox အတွက်လူသိ, ဒါဟာဖြစ်ပါသည် အလွ DOS Emulator ကြောင်းအတွက်ပရိုဂရမ်ရန်အသုံးပြုခဲ့သည် Windows ရှိ DOS ပရိုဂရမ်းမင်းဘာသာစကားအဟောင်း ဒါဟာလုံးဝအလုပ်လုပ်တဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ လိုအပ်သောအရာများကိုရှာဖွေပြီးဒေါင်းလုပ်လုပ်ရန်သာကျန်သည် အင်တာနက်ကို ၎င်း၏ကွပ်မျက်သည်။
ငါတို့မျှော်လင့်ပါတယ် "အကူအညီအနည်းငယ်သာပို့စ်" အပေါ် «DOSBox», အသုံးများသော terminal type tool တစ်ခု၊ ကျွန်ုပ်တို့၏တပ်ဆင်ရန်နှင့်အသုံးပြုရန်လွယ်ကူသည် အခမဲ့နှင့်ပွင့်လင်း Operating Systems, ကျွန်တော်တို့ကို execute ခွင့်ပြုပါတယ် DOS application များ ထိုကဲ့သို့သောအဖြစ် Windows ပလက်ဖောင်း အဟောင်းတွေပရိုဂရမ်ဘာသာစကားများနှင့်ဂိမ်းများကိုတစ်ခုလုံးအတွက်, အလွန်အကျိုးစီးပွားနှင့် utility ကိုဖြစ်ပါတယ် «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» နှင့်၏အံ့သြစရာ, အလွန်ကြီးမားသောနှင့်ကြီးထွားလာ၏ applications များ၏ဂေဟစနစ်၏ပျံ့နှံ့ဖို့ကြီးစွာသောအလှူငွေ၏ «GNU/Linux».
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » applications များ » DOSBox: GNU / Linux တွင် DOS ပရိုဂရမ်းမင်းဘာသာစကားကိုဘယ်လိုသုံးရမည်နည်း။
XAMPP - GNU / Linux ပေါ်မှာလွယ်ကူစွာ install လုပ်ဖို့ PHP development environment